कोहली, धोनी र शास्त्रीको विकल्प खोज्न थाल्यो बीसीसीआई - Nepali Online News Media-shikharnews.com
कोहली, धोनी र शास्त्रीको विकल्प खोज्न थाल्यो बीसीसीआई
२०७६ असार ३१ मंगलवार
आईसीसी विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलबाट भारत बाहिरिएपछि उसको विश्वकप जित्ने सपना सकिएको थियो । विश्वकपको उपाधि इंग्ल्याण्डले जितिसकेको छ ।
विश्वकपलगत्तै अब भारतले वेस्ट इण्डिजविरुद्धको सिरिज खेल्दैछ । सिरिज अगाडि विराट कोहलीको कप्तानी पद धरापमा पर्ने आकलन गरिएको छ भने महेन्द्रसिंंह धोनी टिममा नपर्ने सम्भावना रहेको खबर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले लेखेका छन् । यस्तैमा प्रशिक्षक रवि शास्त्रीको कार्यकाल नलम्बाउने पक्षमा बीसीसीआई रहेको बुझिएको छ ।
बीसीसीआईले नयाँ प्रक्रियाबाट प्रशिक्षक चयन गर्ने तयारी गरेपछि अब रवि शास्त्रीले पनि फेरि प्रशिक्षक हुन चाहेमा आवेदन दिनुपर्ने छ । विश्वकपपछि शास्त्रीको ४५ दिन कार्यकाल थप गर्ने पहिला घोषणा गरिएको थियो । त्यसैका आधारमा शास्त्री वेस्ट इण्डिज सिरिजसम्म रहने छन् ।
अहिले बीसीसीआईले ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ कोचका लागि आवेदन माग गरे पनि उनीहरुको कार्यकाल पनि ४५ दिन थप गरिएको छ । त्यसपछि सबै नयाँ प्रक्रियाबाट शुरु हुने बीसीसीआईका अधिकारीले बताएका छन् ।
ओशो कसरी बने ९० वटा रोल्स रोयस कारको मालिक ?
रजनिश ओशो आफ्नो जमाना चर्चित व्यक्तित्व हुन् । चर्चासँगै विवादले पनि पछ्याएका उनका संसारभर नै अनुयायी छन् । उनको निधन भएको लामो समय भइसक्यो । यद्यपी अहिले पनि विभिन्न मुलुकमा आश्रम खोलेर उनका विचारहरुको अनुशरण गर्नेहरुको संख्यामा बृद्धि भइरहेकै छ । ओशोका नेपालमा पनि थुप्रै अनुयायी रहेका छन् । काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा ओशो आश्रमहरु रहेका छन् ।
विभिन्न कारणले चर्चासँगै विवाद पनि पनि फकेका ओशोसँग ९० रोल्स रोयस कार थियो भन्दा सायद विश्वास गर्न गाह्रो पर्ला । तर यो सत्य कुरा हो । ओशोको अनुयायीहरु उनलाई महँगा महँगा उपहारहरु दिने गर्थे । उनी आफ्ना अनुयायीहरुले उपहार दिएका कार सहर्ष स्वीकार गर्थे । उपहार पाएर नै उनीसँग भएको ९० रोल्स रोयस कार जम्मा भएका थिए ।
ओशो पनि गर्वका साथ आफ्ना भक्तजनहरुले चाहेको खण्डमा जति पनि कार दिन सक्छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिदै हिड्थे । उनको भित्रि चाहना थियो आफुसँग ३६५ वटा रोल्स रोयस कार होस् र हरेक दिन अलग अलग कारमा यात्रा गर्न पाइयोस् । यस्तो अभिव्यक्ति उनी खुल्लमखुल्ला व्यक्त गर्थे । अनुयायीले कार उपहार दिनुलाई उनी सायद गौरव महशुष गर्थे होला ।
ओशोको जन्म ११ डिसेम्बर १९३९ मा भारत मध्यप्रदेशको रायसेन जिल्लामा भएको थियो । उनको प्रवचन सुनेर ठूलो संख्यामा युवा पूस्ता मोहित बन्थ्यो । सन् १९६८ मा उनको सबै प्रवचनलाई जोडेर एउटा किताब प्रकाशन गरेका थिए जसको नाम ‘सम्भोग से समाधि की और’ राखिएको थियो । जसको कारण ओशो अझ बढी विवादमा फसे ।
ओशोले विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेर आफ्नो अनुयायी बनाए । उनका अनुयायीहरुका लागि संसारका धेरै स्थानमा आश्रम खोलिएको थियो । ओशोले भारतमा पहिलो ध्यान केन्द्र सन् १९६२ मा शुरु गरेका थिए । नशालु पदार्थमा लागेको आरोपको कारण ओशोलाई १९८५ मा जर्मनमा गिरफ्तार गरिएको थियो । ओशोलाई विश्वको कुल २१ देशमा प्रवेश निषेध गरिएको छ ।
१० नम्बर नपाएपछि हाजार्डले रोजे २३ नम्बरको को जर्सी
एजेन्सी । बेल्जियमका स्टार इडेन हजार्डले रियल मड्रिडमा २३ नम्बरको जर्सी रोजेका छन्। बास्केटबलका प्रशंसक समेत रहेका हजार्डले बास्केटबलका लिजेण्ड माइकल जोर्डन र लेब्रोन जेम्सले लगाउने २३ नम्बरको जर्सीलाई नयाँ क्लबमा लगाउने भएका छन् ।
उनी लण्डन क्लब चेल्सीमा हुदाँ १० नम्बरको जर्सी लगाउँदै आएका थिए । तर उनले रियल मड्रिडमा १० नम्बरको जर्सी पाएनन् । रियलमा वालेन डी ओर विजेता लुका मोड्रिचले १० नम्बरको जर्सी लगाउँदै आएका छन् । सोही कारण हजार्डले अर्को नम्बर रोज्नु परेको हो ।
रियल मड्रिडमा यसअघि डेबिड बेकहामले २३ नम्बरको जर्सी लगाउने गरेका थिए । अब बेल्जियमका स्टारले सोही नम्बरलाई अगाडी बढाउनेछन् ।उनी यसै सिजन लण्डन क्लब चेल्सीबाट रियल मड्रिड गएका हुन् । उनलाई करिब १ सय ५० मिलियन पाउण्डमा रियलले क्लबमा अनुबन्धन गरेको हो ।
आज खण्डग्रास चन्द्रग्रहण, कुन राशीलाई कस्तो हुन्छ ? ग्रहण सम्बन्धी विस्तृत जानकारी
आज आषाढ शुक्ल पूर्णिमा तिथिका दिन अर्थात् असार ३१ गते मंगलवार आज तदनुसार जुलाई १६ तारिखको राती १७ तारिखको विहान खण्डग्रास चन्द्रग्रहणु लाग्ने भएको छ । यो खण्डग्रास चन्द्रग्रहण नेपाल, भारत लगायत एशिया, अफ्रिका, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, युक्रेन, टर्की, इरान, इराक, साउदी अरब, पाकिस्तान, अट्लान्टिक, हिन्द महाशागर, युरोप लगायत केहि र उत्तरी अमेरिका सहित विश्वका अधिकांश ठाउँबाट देख्न सकिनेछ ।
नेपाली समय अनुसार आज रातीको १ र ४६ मिनेटमा स्पर्श हुने र रातीको ३ बजेर १५ मिनेटमा मध्य हुने र रातीकै ४ बजेर ४५ मिनेटमा मोक्ष हुनेछ । अतः सम्पूर्ण ग्रहण अवधि २ घण्टा ५९ मिनेटको रहनेछ ।
शास्त्रले बताए अनुसार सूर्यग्रहणमा ४ प्रहर अर्थात् १२ घण्टा र चन्द्रग्रहणमा ३ प्रहर अर्थात् ९ घण्टापूर्व सूतक प्रारम्भ हुन्छ । त्यसैले आज दिउँसो ४ बजेर ४६ मिनेटदेखि बालक, बृद्ध, रोगी तथा गर्भवती महिलाहरू बाहेक अरू विवेकशिल प्राणिहरूलाई भोजन निषेध गरिएको छ । ग्रहणको समयमा भोजन निषेध हुनुका साथै पकाउने, भूट्ने, बनाउने, काट्ने, बिभिन्न औजारको प्रयोग गर्ने, भूमी खनन गर्ने, शुभ कार्यको प्रारम्भ गर्ने, मलमूत्र त्याग गर्ने, कपाल कोर्ने, दन्तमञ्जन गर्ने, चेक तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजातहरू आदिमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य तथा देवताहरूको मूर्ति तथा तुलसीको वृक्ष स्पर्श गर्ने कार्य पूर्णरुपले निषेध हन्छ । यसका साथै विशेषगरी ग्रहणको समयमा गर्भवती महिलाहरू घर बाहिर निस्कनु हुँदैन यदि निस्कनै परेमा तुलसीपत्र, कुश, चन्दन साथमा राखेरमात्र घर बाहिर निस्कनु पर्दछ ।
ग्रहणको समयमा के गर्ने ?
ग्रहणको समयमा ग्रहण स्पर्शभए संगै नदी, तलाउ, पोखरी, तिर्थस्थान, खोला, समुन्द्र आदिमा स्नान गर्ने र त्यसै पूण्यकाल अर्थात् ग्रहणको समयमा यथाशक्ति एवं भक्तिले जनावर, चराचुरूङ्गी, नीमुखा प्राणि तथा असहाय प्राणिहरूलाई दान तथा सहयोग गर्नु निक्कै राम्रो मानिन्छ । यसकासाथै ग्रहणकालमा आफ्नो दिक्षा मन्त्रहरू छ भने जप गर्नु, नभए भगवानको मन्त्रहरूको जप तथा ध्यान, होम आदि गर्नाले हजारौँ गुणा बढी फल मिल्ने शास्त्रोक्त वचन छ । यदि आफ्नो राशिको महादशा, अन्तर्दशा थाहा छ भने त्यसको जप गर्नाले ग्रहपीडा कमभइ नवग्रहको समिक कृपा प्राप्त हुनेछ ।
कुनै जातकको जन्म कुण्डलीमा चन्द्रग्रहण योग परेको छ भने त्यस्ता जातकले चन्द्रमा तथा शिवजीको उपासना गर्नाले अत्यन्त लाभकारी हुनेछ । यसका अतिरिक्त वाकसिद्धि, साधना आदिकोलागि पनि पूण्यकाल अर्थात् ग्रहणको समय उपयुक्त मानिन्छ । ग्रहणको पूण्यकालमा ब्रह्माचर्याको पालना गर्दै मनमा गलत विचार आउन नदिई सकारात्मक विचारको मनन, चिन्तन गर्ने, धार्मिक गीत सङ्गीत तथा भजन गाउने वा सुन्ने, वेद, पुराण, उपनिषद्, गीता इत्यादि धार्मिक ग्रन्थको अध्ययन गर्दै मनलाई प्रसन्न बनाइराख्नु अत्यन्तै लाभदायक हुनेछ ।
ग्रहण प्राकृतिक घटना हो, त्यसैले ग्रहण तथा सूतकबाट भयभित हुनुहुँदैन । यसलाई सम्यक रूपले सकारात्मक पक्षबाट लिनुपर्दछ । यस खण्डग्रास चन्द्रग्रहणले मनुष्यजीवन, जीवजन्तु तथा पर्यावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले ग्रहण तथा सूतकबाट भयभित नभई ग्रहणलाई सम्यक रुपले सकारात्मक पक्षबाट लिन आवश्यक छ ।
ग्रहणको समयमा हाम्रो घरमा विकिरण तथा नकारात्मक उर्जा घरभित्र प्रवेश हुने भएकाले ग्रहणकालमा पकाएर खानेकुरा राख्नुहुँदैन, यसकासाथै दूध, दही, घ्यू, पानी, अचार आदि छ भने त्यसमा तुलसीपत्र वा कुश राख्नाले त्यस्ता खानेकुरालाई खराब नगर्ने शास्त्रीय मान्यता छ । यसका साथै घरको मुख्य द्वारमा या खानेकुरा छेउमा शुद्ध गाईको गोबर राख्नाले ग्रहणबाट निस्कने विकिरण तथा नकारात्मक उर्जालाई रोक्ने काम गर्दछ, अतः गाईको गोबर राख्नु राम्रो मानिन्छ ।
यसपटकको खग्रास चन्द्रग्रहण उत्तरषाढा नक्षत्रमा परेको हुनाले आउने ६ महिनासम्म उत्तरषाढा नक्षत्रमा कुनैपनि शुभकार्य वर्जित हुन्छ र यसका साथै उत्तरषाढा क्षत्रमा ग्रहणको योग परेककाले विशेषगरी उत्तरषाढा नक्षत्रमा जन्म भएका, धनु र मकर राशि तथा धनु र मकर लग्न भएका जातकलाई प्रतिकूल हुने देखिन्छ । यस बाहेकका मेषादि बाह्र राशिको ग्रहणफल यसप्रकार रहेको छ स्
मेषः मानहानी हुने, वृषः कष्ट हुने, मिथुनः स्त्रीपीडा हुने, कर्कटः सुख मिल्ने, सिंहः चिन्ता बढ्ने, कन्याः व्यथा बढ्ने, तुलाः श्रीस् प्राप्ति हुने, बृश्चिकः क्षति हुने, धनुः घात हुने, मकरः खर्च बढ्ने, कुम्भः लाभ हुने,
मीनः सुखदायी हुने ि(ज्यो प नारायणप्रसाद दुलाल)
(ज्यो प नारायणप्रसाद दुलाल)
शिल्पाले मागिन् डिभोर्स, छबिले लेखे यस्तो स्टाटस
छवि शिल्पा सम्बन्ध चिसिएको केही दिनपछी शिल्पा एक अन्तरबार्तामा देखिईन । त्यस अन्तरबार्तामा शिल्पा लगभग अन्तरबार्ता भरिनै रोईन । उनले आफ्नो पीडा सबै पोखिन । उनी बारम्बार अन्तरबार्ता भरी नै म कति पीडामा छु त्यो मलाई मात्र थाहा छ भन्दै थिइन् । उनका अनुसार धेरै समय देखि उनले यस्तो पीडा भोगेकी थिईन । यस झगडामा कुनको कानको जाली फुट्ने गरि हानेको आरोप छवि माथी छ ।
छवि भने यो कुरालाई स्विकार्दैनन तर शिल्पालाई डाक्टरले केही दिन स्पिकर बजेको स्थान नजिक नबस्न सुझाव दिएका छन । उनले अन्र्तवार्तामै आफुले डिर्भोस दिएको समेत खुलाएकी छन् । निर्माता ओझाको छवी पछिल्लो समय धुमलिएको छ । उनको छवि फिल्मसँग सम्बन्धित विषयले भन्दा पनि घरेलु समस्याका कारण धुमिलिएको हो ।
यसअघि पनि पटक पटक वैवाहिक जीवनमा धोका बेहोर्दै आएका निर्माता ओझाको चौथो विहे पनि यतिवेला संकटमा परेको छ । यही विषयलाई लिएर छवीले प्रहरीमा गएर शील्पासँग मिलापत्रको कागज समेत गरिसकेका छन् । यद्यपि, मिलापत्र भए पनि छवी र शील्पा यतिवेला सँगै थिएनन् । उनीहरु अलग अलग बस्दै आएका थिए । ।
यस बिषयमा शिल्पाको अन्तरबार्ता आएको केही समय पछाडि नै छबिले आफ्नो फेसबुक मार्फत शिल्पालाई सम्बोधन गर्दै एउटा लामो सन्देश र स्टाटस लेखेका छन । छबिले फेसबुकमा लेखेको स्टाटस यस्तो छ ।
शिल्पा जि, मैले ५२ बर्षको उमेरमा ३ जना श्रीमती सङ सम्बन्ध बिच्छेद भईसकेपछि तपाईं सङ चाहिँ जिन्दगि बिताउन सक्छु होला भनेर जिन्दगिका सब थोक कम्प्रमाइज गरेर माया गरेर बिहे गरेको श्रीमती हो तपाईं ।
छातिमा हात राखेर आज एक्छिनलाई आफैलाई नढाटी सम्झनुस तपाइले लगाएका कति आरोपहरु सत्य छन ? यदि तपाईं पनि आफुलाइ सच्याएर अझै मेरो श्रीमती, तपाइले बिहे गर्ने बेलामा आस्वासन दिलाए जस्तै मेरो बुढेसकालको सहारा बनेर बस्न सक्नुहुन्छ भने, म पनि मेरा कमि कमजोरीहरु सच्याएर गान्धीबादी भएर बस्न सक्छु । अरुको कुरा नसुन्नुस, आउनुस हाम्रो घरको ढोका सधै तपाईंको लागि खुल्ला छ । हैन र यदि तपाइ साच्चै म सङ बस्न सक्नु हुन्न भने पनि एक पटक म सङै आएर टेबलमा कुरा गर्नुस ।
मेरो ईतिहास पल्टाएर हेर्नुस आज सम्म मैले कुनै पनि श्रीमतिलाई अन्यायमा पारेको छैन । तपाइलाइ पनि पार्दिन । मैले बिगत ३ दिन देखि तपाइलाइ सम्पर्क गरेर भेट्न खोज्दा पनि तपाइलाई अब मेरो वकिलले भेट्छ भन्नू भयो । म फेरि पनि भन्दैछु, सन्सारको कुनै पनि अदालतमा जानू पर्दैन । छबी ओझाको अदालतमा सिधै आउनुस । तपाइले न्याय पाउनु हुन्छ । शुभरात्री ।
फेडेरर तेस्रो चरणबाट बाहिरिए, जोकोभिक क्वाटरफाइनलमा प्रवेश
ला लिगा आजदेखि, उद्घाटन खेलमा बार्सिलोना र बिल्बाओ भिड्दै
भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा मोदीको सम्बोधन, “एक देश, एक निर्वाचन”को प्रस्ताव
नेयमारका लागि दुई क्लबले राखेको प्रस्ताव पीएसजीद्वारा अस्विकार !
देउरीबाट १५ केजी चाँदीसहित एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ
२०७६ साउन ३२ शनिवार
अध्यक्षद्वयले गल्ती महशुष गरिसक्नु भयो, अब म हो वरियतामा तेस्रोः खनाल
नेकपामा वामदेव गौतमको छलाङ, बन्लान् त प्रधानमन्त्री ?
आज साउन ३२ गते शनिबारको राशिफल यस्तो छ
नेकपा सचिवालय बैठक सम्पन्न, वामदेवलाई उपाध्यक्ष बनाउने
२०७६ साउन ३१ शुक्रवार
तीजमा सरकारले गरेको कडाई प्रति क्याटरिङ व्यवसायीको आपत्ति
२०७६ साउन २८ मंगलवार
‘मेरो विवाह जबर्जस्ती काकाको छोरासँग गराइयो’
प्रकाश दाहालको नाममा विदेशको कुनै पनि बैंक खाता र पैसा रहेको प्रमाणित गर्न चुनौती
घाँटी रेटिएको अवस्थामा बन्दीपुरको झाडीमा एक व्यक्तिको शव फेला
नेताबाटै शसस्त्र प्रहरीको दुरुपयोग, कुन नेतासँग कति जना छन् प्रहरी ?
२०७६ साउन ३० बिहीवार
सेक्स के हो ?गर्मीको समयमा सेक्स, कतिबेला र कतिपटक गर्ने ?